Dhageyso:-Dowladda oo Ciidamo dheeraad ah geysay xadka Soomalia & Itoobiya | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Dowladda oo Ciidamo dheeraad ah geysay xadka Soomalia & Itoobiya
Dhageyso:-Dowladda oo Ciidamo dheeraad ah geysay xadka Soomalia & Itoobiya
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ay Ciidamo dheeraad ah geysayay Xadka dhinaca Gobolka hiiraan ay Soomaaliya kala wadaagto dhinaca Itoobiya si loo xoojiyo Go’aanka ay dowladda Soomaaliya ku xirtey Xaduudaha.
Deegaannada Ciidamada dheeraad ah la geeyey ayaa waxaa kamid ah deegaanka Geeljire oo Saldhigyo Waaweyn ay ku leeyihiin Ciidamada dowladda Soomaaliya.
Ciidamada dheeraad ah ee la geeyey deegaanka Geeljire ayaa waxaa ay bedeleen Ciidamo horey u joogey,iyada oo Ciidamada Cusub loo Magacaabey Taliye si ay xoojiyaan amniga deegaanka iyo xadka labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya.
Taliyaha saldhiga Booliska degmada Matabaaan ee Gobolka Hiiraan Cabdi Fitaax Maxamed jaamac ayaa sheegay in Ciidamada looga baahan yahay inay halkaasi kasii wadaan howlihii ka socday deegaanka ee amniga la xiriira,isla markaana ay adkeeyaan go’aankii lagu xirey xaduudka.
Previous articleSAWIRO:-Ciidanka DANAB oo howlgal deegaano kula wareegay
Next articleDhageyso:-Sida Muqdisho looga dareemey tallaabo ay qaadeen Ciidanka Dowladda?